Qaar ka tirsan hoggaamiye kooxeedyada Muqdisho oo ogolaaday in ay hubkooda iyo maleeshiyadooda ku wareejiyaan taageerayaasha madaxweyne Yuusuf iyo ra'isul wasaare Geeddi ee loogu yeero ciidamada qaranka kadib markii looga xoog roonaday dagaalkii Villa Soomaaliya, xubnaha golaha baarlamaanka ee ku sugan Baydhabo oo diiday in ay ogolaadaan in 7 xubnood ay maamulaan siyaasadda dalka iyo xildhibaannadii macaaradka ahaa ee ku sugnaa Nayroobi oo kala aadaya Baydhabo iyo meelo kale. Ruunkinet 13/01/07 (Click)
Qaar ka tisan hoggaamiye kooxeedyadii u xuubsiibtay mudanayaasha baarlamaanka ayaa maanta ogolaaday in ay hubkooda iyo maleeshiyadoodu ku wareejiyaan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee u badan taageerayaasha Col. Yuusuf iyo Prof. Cali Geeddi.
Arrintan ayaa ka dambeysay kagaal markii ay kulan la yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'isul wasaare Geeddi.
Warar ayaa sheegaya in ay ogolaadeen arrintan kadib markii looga xoog roonaaday dagaal ku dhex maray Villa Soomaaliya maleeshiyaad ilaala u ahayd xildhibaan Qanyare iyo Xildhiban Cumar Finish iyo kuwa taageersan madaxweynaha ee ku sugan albaabka hore ee laga galay madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho.
Dagaalaasi ayaa la sheegay in ay ku dhinteen maleeshiyaad kor u dhaafaya 8 una badan taageerayaasha Qanyare iyo Cumar Finish.
Dhanka kale, mudanayaasha baalamaanka ee ku sugan magaalada Nayroobi ee mucaaradka ku ah garabka madaxweyne Yuusuf ayaa la sheegay in xilligii loo qabtay in ay ka baxaan dalka Kenya ay shalay ku ekeed ayadoo qaarkood ay goosteen in ay Baydhabo aadaan qaarna ay dalal kale u baqoolaan.
Sidoo kale, waxaa gaashaanka ku dhuftay xildhibaannada ku sugan magaalada Baydhabo wareegto ay ku doonayeen madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'isul wasaare Geeddi in ay 7 qof oo ka tirsan dowladda kana mid yihiin labadooda in ay la wareegaan maamulka dowladda ayagoo sheegay in xaalad deg deg ah dalka ku jiro.